Irè obere azụmaahịa nke ọdịnaya na-enweghị isi maka ndị ahịa | Martech Zone
Ọnụ ọgụgụ 70 nke ndị ahịa na-ahọrọ karịa nweta ozi gbasara ụlọ ọrụ site na ọdịnaya kama site na mgbasa ozi. Pasent 77 nke obere azụmaahịa na-etinye ego n'ime usoro azụmaahịa ọdịnaya iji tọghata ndị ọbịa n'ịntanetị n'ime ndị ahịa. Isi okwu bụ nke a:
Clicks from Shared Content nwere okpukpu ise nwere ike ibute nzụta!
Na mpụga nke oge, ịre ahịa ọdịnaya abụghị ụzọ dị oke ọnụ iji kwalite azụmahịa gị. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke obere ụlọ ọrụ nwere usoro njikwa ọdịnaya siri ike na-arụ ọrụ, na-enyere ha aka ịmepụta na ịkekọrịta ọdịnaya na ntanetị. Ma ha na-eme ihe niile ha nwere ike ịbụ?
Kedu usoro usoro ire ahịa na-arụ ọrụ maka obere azụmaahịa
email Marketing - 80% nke obere azụmaahịa na-agbanwe ndị ọbịa ntanetị n'ịntanetị ndị ahịa jiri akwụkwọ ozi e-news.
Isiokwu - 78% nke obere azụmaahịa na-agbanwe ndị ọbịa ntanetị n'ịntanetị site na ibipụta isiokwu na ntanetị.
Foto ringkekọrịta - 75% nke obere azụmaahịa na-agbanwe ndị ọbịa ntanetị n'ịntanetị site na ịkekọrịta foto na ihe osise n'ịntanetị.
Videos - 74% nke obere azụmaahịa na-agbanwe ndị ọbịa na ntanetị n'ịntanetị site na ibipụta vidiyo na ntanetị.
Ihe ndekọ 4 kachasị elu bụ ihe kpatara anyị ji mepụta CircuPress dịka a ala mgbakwunye plugin maka WordPress. Anyị chọpụtara na ọtụtụ obere azụmaahịa na-arụ ọrụ na ọdịnaya ha, mana enweghị sistemụ email dị na ya nke nwere ike kesara ndị debanyere aha ọdịnaya ahụ na-enweghị oge ma ọ bụ teknụzụ na-agbagha njikọta na edemede.
Onye mebere ihe omuma a bu AKARA. Kwa afọ, Akara na-enye ndị na-azụ ahịa azụmaahịa, ụlọ akwụkwọ na agụmakwụkwọ ihe karịrị 375,000 ọhụụ na obere ụlọ ọrụ na-eto eto. Ihe kariri ndi okacha mara ahia 11,000 weputara onwe ha dika ndi ndu na ihe kariri 320 isi ndi na-aru oru ndi mmadu n’agugu akwukwo.
Tags: 2015b2comume kacha mmacircupresscontent Marketingemail MarketingAkaraobere azụmahịa